Nouvelle Caledonie: Ny Fetin’ny Omby · Global Voices teny Malagasy
Nouvelle Caledonie: Ny Fetin'ny Omby
Voadika ny 26 Jolay 2017 17:43 GMT
(Marihina fa tamin'ny 19 oktobra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Hoy i Sebastien Merion avy ao amin'ny 5 Minutes en Nouvelle Caledonie :
Tsapako toy ny niverina tany Etazonia aho, kanefa tsia, fa eto amin'ny tanànakelin'i Paita ihany sy ny Fetin'ny Omby malaza !! Mety efa nieritreritra anefa ianao ny ho any , miaraka amin'ny ambiansin'ny satroka Cowboy sy ny mozika ‘country’, ary ny olona marobe. Vao voalohany ho anay ny nanatrika rodeo (fifaninanan'ny cowboy mitaingin'omby). Raha ny marina, tsy nahasarika ahy loatra ny karazana fampisehoana toy izany kanefa nandeha tany an-toerana aho mba haka sary ary tena variana aho . Tena nahafinaritra ahy izany, manasa anao hijery. Kanefa tsy mijery manontolo izahay satria tsy mihinan-kena, toy ny fanesorana ny taovam-pananahan'ny biby sy ny mihinana vihy! Tsia fa misaotra ;-)) Naka ny lahatsarin'ny rodeo ho anareo aho sy nitondra ireo sary … Nampiaiky volana ahy ny omby milanja 800 kilao , indrindra fa rehefa nosokafan'izy ireo ny fefy fiarovana kanefa ianao santimetatra vitsivitsy fotsiny aorian'izany! “
Sary namboarin'i Sebastien Merion .